Soo saareyaasha ugu Weyn ee ugu Weyn 2020, Warshadda Caadiga ah ee Caloolaadka | Awood leh
KU SOO DHAWAADA CADAWADA AADANKA
Alaabada Ciyaarta ee awooda leh waa lammaanahaaga ugu fiican haddii aad rajaynayso inaad ku beddesho ceeryaamo xumbo oo ku dhex yaal baarkinka trampoline ama xarunta jimicsiga oo ay ku jiraan boorsooyinka hawada, ama waxaad rabtaa barkadaha waawayn ee firfircoon si ay u gaaraan kororka rikoodhka.
Alaabada Ciyaarta ee awooda leh waa lammaanahaaga ugu fiican haddii aad fiirineyso inaad ku bedesho ceelashaaga xumbada qolkaaga trampoline ama xarunta jimicsiga boorsada hawada, ama waxaad hiigsaneysaa inaad ku garaacdo duullimaadyo jajabaal weyn. Ma waxaad dooneysaa inaad ka hesho farxad dheeraad ah koorsada xargahaaga sare, mise waxaad heysataa meel horey u jirtay ama meel dheeri ah? Mawaxaad raadineysaa aag cusub oo lagu daro jardiinadaada khibradda leh si ay kaaga caawiso inaad u abuurto dakhli badan isla markaana aad u kala badhiso howlahaaga waxqabadka? Stunt Airbag waa doorasho wanaagsan!
Ku boodista boodhka ah 'Custom inflatable bouncer' ee Alaabada Ciyaaraha ee Kirismaska
2020 Warshadaha ugu fiican boodboodka boodboodka tooska ah ayaa si toos ah u fidiya boodhka boodhka boodhka ee kirismaska ​​qiimaha tartan, la xiriir warshad Powerful.
Awood leh 2020 Barkaca Bmx-ka ugu caansan, Custom Airbag Bmx Landing Ramp
2020 ugu caansan uguna caansan caadooyinka bmx barkinta, samaynta barkinta bmx soosaarista soo-cagaarka, naqshadda 3d ee bilaashka ah, moq: 1piece, gudbinta dhakhsaha badan, waqtiga hogaaminta gaaban, nala soo xiriir hadda
Isboortiga Sahlan ee Caadiga Ahayd, 3d Naqshadeynta Naqshadeynta Diyaaradda Bilaashka ah ee 3d Awoodda leh
Warshad alaabada lagu ciyaaro ee awooda leh oo awood badan leh ayaa waxay siisaa jimicsi jaban oo la isku halleyn karo, adeegga barkinta jimicsiga isboortiga ee macaamiisha adduunka, faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan isboortiga awooda leh ee awooda leh, hada weydii internetka.
Diyaaradda Socotada Awoodda leh ee Sarta Diyaaradaha Burcad Badeedka ah ee BMX
$ $> Maraadineysaa barkinta shilka? La xiriir warshad awood leh oo la isku halleeyn karo, 2020 alaabta ugu caansan ee alaabada lagu ciyaaro ee la soo bandhigo oo bixiya barkinta hawada, naqshad lacag la’aan ah, khibrad darawalnimada ugu wanaagsan.
Waxaan nahay mid ka mid ah warshadihii ugu horreeyay ee barkimaha hawada keena xirfadlayaal RKooxaha $ $> D.
Waxaan ku lifaaqnaa muhiimad weyn xagga horumarka wax soo saarka iyo tijaabinta. In si nabadgalyo ah loo socdo waa raadkeenna. Toy karti leh ayaa iibiyay in ka badan 10000 boorsooyinka hawada ilaa hadda. Waxaan had iyo jeer u bixinnaa alaabada ugu fiican iyo adeegga hufan ee macaamiisha adduunka oo dhan.
Dhismeheeda adag iyo miisaanka culus awgiis, BMX Airbag ayaa noqotay barkinta ugu caansan ee barkadaha lagu ciyaaro, jardiinooyinka barafka ah iyo baarkinada baaskiilka. Tilmaanta Hawada! Hawadaan hawadu waxay sifiican ugu shaqaysaa dhamaan laylisyada dabaqa ah iyo kaadida tuman. Laga soo bilaabo jimicsiga ilaa jimicsi, laga bilaabo fasalka kung-fu ilaa jimicsiga jimicsiga, waxay saldhig weyn u tahay noocyo badan oo isboorti iyo tababaro tababar ah.
Badeecadeenu waxay joogtaa heer aad u sareeya. Waxaan bixinaa qiime aad u tartami kara oo macquul ah. Waxaan wadnaa khadadka wax soo saar aad u ballaaran. Waxaan had iyo jeer aaminsanahay in tayada tayada leh, adeegga wanaagsan, iyo qiimaha tartanku ay yihiin habka kaliya ee lagu sahmi karo suuqa weyn. Waxaan fiiro gaar ah siineynaa faahfaahinta ku saabsan nashqadeynta, waxsoosaarka, nidaamka kala shaqeynta, iyo dhoofinta.
Waxaan nahay soosaaraha ugu sareeya adduunka ee barkimaha hawada.
Awoodda Toys Co., Ltd. waa soo-saare kaabayaasha wax dhaliya. Waxaan si fiican ugu qalabeysan nahay qalabyada tijaabada iyo xoog farsamo oo xoog leh. Annaga oo ka mid ah kuwa ugu waaweyn soosaarayaasha soo saarta ee Shiinaha, waxaan ku kasbanay sumcad tayo iyo adeeg suuq caalami ah, gaar ahaan Yurub, Mareykanka, Australia, iyo Bariga Dhexe.
Boodhadhkayada, Boodhadhka, Caarada, Caqabadaha, Cayaaraha Ciyaaraha, Ciyaaraha Biyaha, Tuullooyinka, Moodalka Sicirbararka, Arch, Kartoylka Kirismaska, Kubbadda PVC, Dhaantada Hawada, Dabaal Kubadda iyo wax la mid ah badeecadaha la isku gudbin karo.
Kaliya ku dhaaf emaylkaaga ama lambarkaaga taleefanka foomka xiriirka si aan kuugu soo dirno xigasho bilaash ah oo ku saabsan naqshadeynta badan ee ballaaran!